वास्तविक समाजवाद अँगाल्न चुकेका छौँ- डा. सशांक | सिमान्तMarginal वास्तविक समाजवाद अँगाल्न चुकेका छौँ- डा. सशांक – सिमान्तMarginal
वास्तविक समाजवाद अँगाल्न चुकेका छौँ- डा. सशांक
Posted on 29 Feb 20162Mar 2016 by Jesi for INCOMESCO
बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद कांग्रेसी नेताका व्यवहारमा देखिँदैन नि ? भनेर अन्नपूर्ण पोष्टले सोधेको प्रश्नमा ने का नेता डा सशांक कोईरालाले भन्नु भएको थियो-
“यो एकदम ठीक हो । अक्सफाम भन्ने संस्थाको तथ्यांकअनुसार एक प्रतिशत जनसंख्यासँग विश्वको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति छ । ६५ जनाको सम्पत्ति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । (खासमा त 62 जनको हातमा 50 प्रतिशतभन्दा बढी) यो गरिब र धनीबीचको खाडल किन बढ्यो ? बीपीले प्रतिपादन गरेको समाजवाद आजको वास्तविकता हो । यो अझै पुरानो भएको छैन । वास्तविक समाजवाद अँगाल्न हामी चुकेका छौँ । बीपीले प्रतिपादन गरेको समाजवाद भनेको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिने गरी हुने सुधार नै हो । महाधिवेशनमा यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।”
के नेकाले विगतलाई सच्याउन सक्ला ? आसा गर्न सकिए पनि भर गर्न भने गारो छ ।
Posted in असमानता, नेपाल, नेपाली कङ्रेस, बिकासTagged नेपालको राजनीति, नेपाली कङ्रेस, बिकासLeaveacomment
Previous Postतनहुँँ, बिकेन्द्रिकरण र स्थानिय बिकासNext Postओलीले भ्रमण गरेलगत्तै नेपालमा जाने सहयोग भारतले घटाइदियो